Iindaba - izinto ze-eva foam mat kunye nezinto zokuzikhusela
I-EVA foam floor mats ziye zasetyenziswa ngokubanzi emsebenzini nakubomi, kwaye zinokubonwa emakhaya, kwiindawo, kwiziko lomthambo nakwezinye iindawo. Ukuveliswa kwezinto ze-EVA kusetyenziswa imethi yomgangatho kunezibonelelo ezininzi. Umzekelo: ukuxhathisa okuhle, ukungangenwa kwamanzi, ubungqina bombane, njl. Masixelele ngezinto ze-EVA.
Iimpawu EVA amagwebu floor mat:
Ukumelana namanzi: Isakhiwo seseli esingangeni moya, akukho ukufunxwa kwamanzi, ukuxhathisa ukufuma, kunye nokumelana kwamanzi.
Nokumelana: ukumelana nokubola kwemichiza njengamanzi olwandle, igrisi, iasidi, ialkali, i-antibacterial, engenatyhefu, engenavumba, kunye nongcoliseko-moya.
Ukuqhubekeka: Akukho zihlanganisi, kwaye kulula ukuzisebenzisa njengokucinezela okushushu, ukusika, ukunamathela, kunye nokudibanisa.
Ulwaphulo-mthetho: ukomelela okuphezulu kunye nokuchasana nokuqina, ubukhali obuphezulu, ubungqina obothusayo kunye nokusebenza kokuthuthuzela.
Ukufakelwa kobushushu: Ukugquma okugqwesileyo kwe-thermal, ukugcina ukubanda kunye nokusebenza kobushushu obuphantsi, kwaye kunokumelana nokubanda kakhulu kunye nokuvezwa.
Ukufakwa kwesandi: Iseli engena moya, isiphumo esihle sokugquma isandi.
Xa umxholo we-acetate ye-vinyl kwi-EVA ingaphantsi kwama-20%, inokusetyenziswa njengeplastiki. I-EVA inokumelana neqondo lobushushu obuphantsi. Ubushushu bayo bokubola bubushushu buphantsi, malunga ne-230 ° C. Njengokuba ubunzima beemolekyuli bukhula, indawo yokuthamba ye-EVA iyanda, kunye nokusebenza kunye nokuqaqamba komphezulu wamalungu eplastiki kuyehla, kodwa amandla ayonyuka kunye nefuthe lokuqina kunye noxinzelelo lokuchasana noxinzelelo lokusingqongileyo kuyaphuculwa. Ukuxhathisa kwemichiza kunye nokuxhathisa ioyile kwe-EVA kubi kancinci kunoko kwe-PE kunye ne-PVC, kwaye utshintsho luyacaca ngakumbi ngokwanda komxholo we-acetate ye-vinyl.
Xa kuthelekiswa ne-PE, ukusebenza kwe-EVA kuphuculwe, ubukhulu becala ngokwe-elasticity, flexibility, gloss, air permeability, njl.njl. Ingasetyenziselwa ukuqinisa ngakumbi ukuzalisa. Iindlela zokuphepha okanye ukunciphisa ukuthotywa kweepropathi zoomatshini be-EVA kune-PE. I-EVA inokulungiswa ukuze ifumane usetyenziso olutsha. Ukuguqulwa kwayo kunokuqwalaselwa kwimiba emibini: enye kukusebenzisa i-EVA njengomqolo wokumilisela ezinye ii-monomers; enye kukunxila kwe-EVA.
Unyango lwe-EVA kunye nokuqwalaselwa
Indlela yokulwa nomlilo:Abacimi-mlilo kufuneka banxibe iimaski zerhasi kunye nempahla yokulwa umlilo ngomzimba opheleleyo, kwaye bawucime umlilo kwicala elinyukayo. Ukucima iarhente: inkungu yamanzi, ugwebu, umgubo owomileyo, icarbon dioxide, umhlaba oyisanti.
Unyango olungxamisekileyo:Yahlula indawo engcolileyo kwaye uthintele ukufikelela kuyo. Sika umthombo womlilo. Kucetyiswa ukuba abasebenzi abaphendula ngokungxamisekileyo banxibe iimaski zothuli (iimaski zobuso ezipheleleyo) kunye neesuti ezingqina ubungqina begesi. Thintela uthuli, tshayela ngocoselelo, ubeke engxoweni kwaye udlulisele kwindawo ekhuselekileyo. Ukuba kukho isixa esikhulu sokuvuza, kuqokelele ukuze kusetyenziswe kwakhona okanye ukusiwa kwindawo yokulahla inkunkuma.
Inqaku lokusebenza:Ukusebenza kokungenisa umoya, ukubonelela ngeemeko ezifanelekileyo zokungenisa umoya. Abanini zithuthi kufuneka bafumane uqeqesho olulodwa kwaye bathobele ngokungqongqo iinkqubo zokusebenza. Kuyacetyiswa ukuba abaqhubi banxibe izixhobo zokuphefumla zokucoca ulwelo, iiglasi zokhuseleko lweekhemikhali, iimpahla zokuzikhusela kunye neiglavu zerabha. Gcina kude nomlilo kunye nobushushu, kwaye ukutshaya akuvumelekanga ngokungqongqo kwindawo yokusebenza. Sebenzisa uqhushumbo-moya kunye nezixhobo. Gwema ukuvelisa uthuli. Gwema ukudibanisa ne-oxidants kunye ne-alkalis. Xa uphethe, layisha kwaye ukothule ngononophelo ukunqanda ukonakala kweepakethe kunye nezikhongozeli. Ukuxhotyiswa ngeentlobo ezihambelanayo kunye nobungakanani bezixhobo zokulwa umlilo kunye nokuvuza kwezixhobo zonyango olungxamisekileyo. Izikhongozeli ezingenanto zinokuba ziintsalela eziyingozi.
Qaphela:Gcina kwindawo epholileyo, yokugcina umoya. Gcina kude nomlilo kunye nemithombo yobushushu. Kufuneka igcinwe ngokwahlukeneyo kwii-oxidants kunye neealkali, kwaye kuthintele ukugcinwa okuxubekileyo. Ukuxhotyiswa ngeentlobo ezifanelekileyo kunye nobungakanani bezixhobo zomlilo. Indawo yokugcina kufuneka ixhotyiswe ngezinto ezifanelekileyo zokugcina ukuvuza.
Kwinkqubo yokuhombisa kunye nenkqubo yokuhombisa, ukuba ukhetha izinto ze-EVA njengezinto zekhaphethi, ungazisebenzisa ngokukhuselekileyo ezi zinto zintsha ngokuhoya iingxaki ezichazwe apha ngasentla. Abathengi akufuneki balibale uphawu lwentengiso kunye nokuthengiswa kwayo emva kokuthenga izinto. Esi sisitshixo semathiriyeli.
Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, Ingxowa yeYoga yokuHamba, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba, Ingxowa yeYoga yeSling, I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, iphazili yomthambo,